शिवमायामाथि घोर अन्याय गर्दै नेकपा !
Tuesday, August 11, 2020 |मंगलवार, श्रावण २७, २०७७
शिवमायामाथि घोर अन्याय गर्दै नेकपा ! संवैधानिक अध्येयता भन्छन्–दबाब वा करकापले राजीनामा गराउन मिल्दैन
जनतापाटी डेस्क आइतवार, पुष २७, २०७६, ०४:४१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताबीचको आन्तरिक शक्तिसन्तुलनका कारण सभामुख चयनको मुद्दा असाध्यै पेचिलो बनेको छ । प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद अहिले पूर्णतः खाली छ । कारणः तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुव्र्यवहारको अभियोग लागेपछि गएको असोजमा उनी आफैले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । यद्यपि, अहिले सत्तारुढ नेकपाले गरिरहेका गतिविधिले सभामुख रहिराखेको तर, निलम्बनमा रहेको जस्ता आशय बोको देखिन्छ । र, उपसभामुख हटाउने सन्दर्भमा महरालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएकै जस्तो व्यवहार अपनाइएको छ ।
उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेमाथि जुन प्रकारले राजीनामाको दबाब बढाईएको छ त्यसले यो आशय पुष्टि गर्छ । अहिलेको समयमा उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फे पदमुक्त हुने एउटा मात्रै उपाय छ । त्यो हो, स्वेच्छाले राजीनामा दिनू । र, उनलाई निकाल्ने अर्को जोखिमपूर्ण विकल्पमा जाने सत्तारुढ पार्टीसँग कुनै आधार छैन । जोखिमपूर्ण विकल्प भन्नाले, महाभियोग । आफ्नै पार्टीबाट हिजो उपसभामुखको उम्मेदवार बनाइएको व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउने हिम्मत गर्नलाई सानोतिनो आँटले हुँदैन । उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने त झन् हिजो जबरजस्ती हुलिएको थियो, उपसभामुखमा उनलाई ।
त्यही भएर उनले मुखै फोडेर भनेकी छन्, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि मलाई पार्टीले उपसभामुख बनाउने निर्णय गरेकै बेला मैले भनेकी थिएँ, मलाई तपाईंहरूको उपसभामुख पद चाहिँदैन ।’ यो विषयमा मैले नेताहरूसँग अडान नै राखेकी थिएँ, उनले अगाडि भनिन्, ‘तर, निर्णय गरिसकेका कारण पार्टीलाई अप्ठ्यारो होला भन्ने लागेर केन्द्रीय सदस्य र मोरङ इन्चार्जबाट राजीनामा दिएकी हुँ । र, अन्तिम १५ मिनेट बाँकी छँदा उपसभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिएँ । उपसभामुख निर्वाचन भएपछि मैले शपथ लिएकी थिएँ–कसैको डर नमानी उपसभामुखको जिम्मेवारी पूरा गर्छु । र, अहिले पनि म त्यही शपथलाई टेकेर अघि बढ्ने तयारीमा छु ।’
त्यति मात्रै होइन उनले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र व्यक्तिको पदीय मर्यादालाई बुझ्न सत्ताधारी दलका नेतालाई आग्रह गरेकी छन् ।
उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘राजीनामा दे भनेर नेकपाले मलाई निर्देशन गर्न मिल्दैन । म अहिले त्यो दलको सदस्य पनि होइन । मैले अहिले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभालाई रिक्त बनाउनै मिल्दैन । संविधान र कानूनले संसद्को नेतृत्व रिक्त पार्ने परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको परिपालना गर्नु मेरो कर्तव्य हो, पदीय मर्यादा हो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाको परिपालना गर्नैपर्छ ।’
डा. तुम्बाहाम्फेको यही कुरालाई लिएर हामीले संवैधानिक अध्येयताहरुलाई सोध्यौँ । संवैधानिक अध्येयता डा. विपिन अधिकारीले अहिले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन गरिएको प्रेसर कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित छैन, भने । उनले भने, ‘अहिले संविधानको व्यवस्था अनुसार अहिले उसभामुखको पद रिक्त हुने दुईटा विकल्प छ । त्यो मध्ये पनि सजिलो भनेको डा. तुम्बाहाम्फेले करकाप भन्दा पनि स्वतन्त्र रुपमा स्वेच्छाले राजीनामा दियो भने मात्रै । अर्को भनेको महाभियोगको विकल्प हो । त्यसो गर्नलाई उहाँको आचरणमा अहिलेसम्म दाग लागेको हामीले देखेका छैँनौँ । त्यो त असम्भव कुरा हो ।’
उनका अनुसार सभामुख चयन पेचिलो बनेको सत्ताधारी दलभित्रको दृष्टिदोषले हो । समस्या कहीँ पनि छैन, डा. अधिकारीले भने, ‘समस्या छ त हाम्रो दृष्टिकोणमा । आफ्नो आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको पद र हैसियत दाउमा राख्न मिल्दैन । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो ठीक होइन । यो त उहाँ (डा.तुम्बाहाम्फे)माथि घोर अन्याय हो ।’
उपसभामुखले संसदको बैठक बसाल्ने कुरा असंवैधानिक नभएको भन्दै डा. अधिकारीले बरु ज–जसले प्रश्न उठाएका छन्, उनीहरुले नियमावली सभामुख एवं अध्यक्षलाई विद्यमान बनाइएको प्रतिनिधि सभा नियमावली परिमार्जन गर्न तयार हुनु पर्ने हो, भने ।
संसदको नियमावली आन्तरिक नियम हो, उनले भने, ‘नियमावली संवैधानिक प्रावधान अनुसार हुनुपर्ने हो । संविधानमा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने भनेकाले त्यही अनुसार नियमावली बन्नु पर्ने हो । तर, त्यसो भएन । सभामुखलाई मात्रै विद्यमान बनाएर नियमावली बनाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा त्यसले रोक्दैन । संवैधानिक प्रावधानलाई आधार बनाएर जाने हो ।’
डा. अधिकारीका अनुसार संविधानको कुनै पनि प्रावधानले उपसभामुखले बैठक बसाल्न पाउँदैन भनेकै छैन । यसमा टिप्पणी गर्ने ठाउँ नै छैन, उनले अगाडि थपे, ‘निवमावलीले संविधानले दिएको अधिकार प्रभावित गरेको देखिन्छ । यो बेला नियमावली निलम्बन गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ भने अध्यक्षता गर्ने मान्छेले समेत त्यसको व्याख्या र परिमार्जन गर्न सक्छ । यो चाँहि समस्याको कुरा होइन, समस्या यहाँ दृष्टिकोणमा हो । ‘पदलाई यति महत्व किन दिइँदै छ ?’।’ यो राम्रो हुँदै होइन ।वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले ‘सभामुख हुन् वा उपसभामुख यी स्वतन्त्र मान्छे हुन् । उहाँहरुलाई निर्णयमा स्वतन्त्र छोड्नु पर्छ । बाध्य पारिनु हुँदैन’भने ।
अहिले पृष्ठभूमिमा जे देखिएको छ त्यो राम्रो होइन, उनले अगाडि भने, ‘एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुने गरी सभामुख चाहिने र अर्कोतिर प्रचण्डले पनि आफ्नो भागको सभामुख नछोड्ने । यस्तो हुनु हुँदैन । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टिनु पर्ने हो । तर, कार्यपालिकाको प्रभावमा काम गर्ने मान्छे खोजिरहेको जस्तो देखियो । यो प्रणाली विपरीत हो ।’
संवैधानिक अध्येयता डा. सूर्य ढुंगेलले पनि उपसभामुखलाई राजीनामा दिन पार्टीको निर्देशन आएको कुरा र अन्य गतिविधिहरु ठीक नभएको बताए । उनले भने, ‘यो संवैधानिक पद्दती र संसदीय प्रणाली विपरीत हो । सभामुख र उपसभामुख ‘न्यूट्रल जज’ हो । यो पद ईन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ । अहिले जे गरिँदै छ त्यो ठी होइन ।’ उनले संविधान एउटा बनाउने र प्राक्टिश अर्को गर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
अहिले एकसाथ धेरथरी कुरा सुनिएका छन् –उपसभामुखलाई राजीनामा दिन भन्दै सचिवालयको निर्देशन, बालुवाटारमा बोलाएर सोधपुछ र जेष्ठ सदस्यबाट संसद बैठक चलाएर सभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु गरिने जस्ता ।
उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले केही दिन पहिले आफु सभामुखका लागि योग्य भएका कयौँ प्रमाण पेश गरिन् । व्यक्तिगत आचरण मात्रै होइन, जानकारहरुले उनलाई सभामुख बनाउनु पर्ने थुप्रै आधारहरु रहेको बताएका छन् ।
पढाईलेखाई, समावेशीको कुरा गर्दा पनि महिला जनजाति सबै खुल्ने र सदनको कामकारबाहीमा अभ्यस्त भइसकेको लगायत योग्ता छन्, उनीसँग । तर, अहिले सत्ताधारी दल नेकपाभित्र देखिएको दृष्टिदोषले उनलाई अन्याय पर्ने खतरा छ ।
पार्टीका केही मान्छेहरुले यतिसम्मको प्रचार गरिदिएका छन् कि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नु अघि नै शिवमायाको राजीनामा आउँछ । तर, उनको स्वेच्छालाई मारेर गरिएको लेन–देनले प्रजातान्त्रिक पद्दती मर्ने मात्रै नभई व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जाग्ने संवैधानिक अध्येयताहरुले बताएका छन् ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली नै उत्रिए महासचिव पौडेलको बचाउमा अन्ततः बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्ना पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको बचाउ गरेका छन् । मंगलवार, बैशाख १७, २०७६, १०:१२:००
जो मन्त्री हटाइँदैछन्... हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको कुटनीतिक भ्रमणले परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको मन्त्री पदलाई सुरक्षित तुल्याएको छ । २३ वर्षपछि भएको भ्रमणले परराष्ट्र मन्त्रीलाई ‘जस’ लिने मौका भयो । चीनसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सक्षम मन्त्रीको रुपमा चित्रण गरिन थालिएको छ । सी भ्रमणलाई सरकारले आफ्नो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च उपलब्धि समेत भनेर व्याख्या गरिरहेकोले ज्ञवालीलाई ठूलो राहत मिलेको छ । बिहिवार, आश्विन ३०, २०७६, ०८:१५:००
वैकल्पिक शक्ति ‘गफाडी समूह’ होइनन् तर, मत अन्तर कति रहयो ? उही पहिले कै आठ हजार (८४०३) । अन्य ठाउँमा पनि हार अन्तर खासै फरक छैन । सोमवार, मंसिर १६, २०७६, ०७:०१:००
लामो दूरीका यातायात र हवाई उडान भदौ १६ गतेदेखि मात्र खोल्ने निर्णय
बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद् बैठक जारी, लकडाउनको मोडालिटीबारे निर्णय हुनसक्ने
ओली पक्ष ‘नेता चोर्न’ सक्रिय
‘देश र जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर सकरात्मक निकास निकालौँ’- श्रेष्ठ